Madaxweyne Siilaanyo Iyo Guddiga Uu Magacaabo: Masuuliyiin Guddi Kasta Ku Jira Iyo Falanqaynta Hagardaamada Ay Ku Keentay Hawlaha Qaranka - Somaliland Post
Home News Madaxweyne Siilaanyo Iyo Guddiga Uu Magacaabo: Masuuliyiin Guddi Kasta Ku Jira Iyo...
Madaxweyne Siilaanyo Iyo Guddiga Uu Magacaabo: Masuuliyiin Guddi Kasta Ku Jira Iyo Falanqaynta Hagardaamada Ay Ku Keentay Hawlaha Qaranka
Hargeysa(SLpost)-Madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa lixdii sannadood ee uu talada hayay wuxuu caan ku noqday inuu magacaabo guddiyo uu u diro hawlo kala duwan oo qaranku leeyahay, waxaana muddadaas xadka ka baxay guddiyada uu madaxweynuhu magacaabo, oo la kowsaday tan iyo dhismihii golihiisa wasiirada.
Waa arrin iska caadi ah in guddiyo farsamo loo magacaabo hadba wixii hawl soo korodha, waxase isweydiin iyo doodo adag abuuray noocyada shaqo ee uu madaxweyne Siilaanyo u magacaabo guddiyada badankooda oo ay dadka qaar u arkaan hawlo sida dhiciskii birta aan kugu simayn ah oo xal u heliddoodu u baahan tahay dhaqso si aanu xaal faraha uga sii bixin ama dhibaato taagani khasaare badan sii geysan, waxaa iyaduna jirta dood xooggan oo ah in madaxweyne Siilaanyo marar badan guddiyo u magacaabo arrimo caadi ahaan uga mid ahaa shaqo maalmeedka uu qaranka ugu igman yahay.
Arrinta kale ee aalaaba doodda maangalka ahi ka dhalato, marka laga hadlayo guddiyada madaxweyne Siilaanyo ayaa ah dadka uu guddiyadaas ku darayo. Sida caadiga ah hawlaha guddi qaran loo dirayaa waxa ay u kala bixi karaan kuwo shaqada tooska ah ee xukuumadda ka mid ah, sida guddida biyo ballaadhinta oo qayb ka ah shaqada wasaaradaha iyo wakaaladaha biyaha iyo guddiyo loo igmado hawlo farsamo iyo waajibaad ka ballaadhan inta ay wasaaradi qabato ama hawl degdeg ah oo soo baxday. Marka aynu guddida hore eegno waxaa muhiim ah in haayadda shaqadaas lihi ka dhex muuqato, laakiin guddida dambe qasab ma’aha in ay wasiirro ku jiraan.
Haddaba dhibta taagan ayaa ah in guddi kasta oo uu madaxweyne Siilaanyo magacaabo ay ku jiraan tiro wasiirro ah. Caadi ahaan wasiirku waxa uu qaranka u hayaa shaqo cayiman, marka la eego dalkeenna oo weli yagleel ah iyo haayadaha qaranka oo aan gaadhin heer ay is wadaan, balse wasiirka ku socda badankoodu, in wasiirka hawl kale loo diraa waxa ay caqabad ku noqonaysaa haayaddii uu maamulayey.
Arrintuse waxa ay sii murugaysaa marka wasiirkii ama masuulkii keli ahaa uu madaxweynuhu ku daro guddiyo tiro badan.
Waxaa jira wasiirro iyo masuuliyiin lagu dhex arko guddi kasta oo uu madaxweyne Siilaanyo magacaabo, waxa aanay taasi keenaysaa in su’aal la iska weydiiyo waqtiga iyo maskaxda ay gelin karaan shaqada guddiyada kala duwan ee ay ku jiraan iyo shaqadii kale ee ay qaranka u hayeen oo u sii dheer.
Masuuliyiiinta caanka ku ah guddiyada Madaxweyne Siilaanyana waxaa ka mid ah:
Labadii bilood ee u dambeeyay wuxuu Madaxweyne Siilaanyo guddiyo badan oo uu magacaabay guddi kasta ku daray madaxweyne-xigeenka Cabdiraxmaan Saylici oo ka mid ah guddiyada kala ah.
1. Guddiga wax ka qabashada sicir bararka
2. Guddiga abaaraha.
Wasiirka madaxtooyada Maxamuud Xaashi Cabdi, ayaa isna ku jira guddiyo badan oo uu Madaxweynuhu magacaabo, waxaana ka mid ah
1 Guddida Sicir-bararka.
2 Guddida aqoonsi raadinta.
3)- Guddida dib u habaynta dhulka
Wasiirka gaashaadhiga Axmed Xaaji Cali Cadami, ayaa isna ku jira guddiyadan
1. Guddiga abaaraha
2. Guddiga qaban qaabada xuska 18 May
Wasiirka maaliyada Samsam Cabdi Aadan, ayaa iyaduna ku jirta guddiyada kala ah
2. Guddiga gurmadka abaaraha
3. Guddiga qaban qaabada 18 May
4. Guddiga dib u habaynta iyo gacan ku haynta guryaha dawladda
Guddiyadan tirada badan ee uu Madaxweyne Siilaanyo magacaabay iyo masuuliyiinta dhawrka goor ku soo noqnoqday oo aan ku koobnayn intan oo keliya, ayaa abuuraya dareen ah in aanay magacaabistoodu ku fadhiyin aragti lafa-guran iyo qorshe miisaaman.
Geesta kale, bulshada ayaa ku jaho-wareertay guddiyada badan ee uu Madaxweyne Siilaanyo magacaabo oo aan lagu arki jirin labadii madaxweyne ee talada uga horeeyay.
Waxase ka sii yaab badan, in aan weli la’ arag natiijo ay guddi uu Madaxweynuhu magacaabay ka soo saartay arrimaha loo diray, marka laga reebo guddigii u horaysay ee uu madaxweyne Siilaanyo magacaabay markii la doortay, kuwaas oo soo saaray qoraal ay kaga tallo bixiyeen taladii uu weydiistay oo ahayd dhismaha xukuumadiisii u horaysay, taas oo aanu iyadana habayaraate waxba ka fulin.
Ugu dambayntii guddiyada madaxweyne Siilaanyo oo weli sii socda ayaa xoojinaya doodda adag ee laga qabo tayada xukuumadda madaxweyne Siilaanyo iyo kartida wax-qabad ee masuuliyiinta uu hawlaha qaranka u diro oo haddana qaarkood shaqadooda guddiyo lagu xoojiyo.